China Yakachena uye Yemasikirwo dhisiki yakakosha oiri Lavender Oiri muhuwandu hwakawanda fekitori uye vanotengesa | Dzidziso
Yakachena uye Yemasikirwo dhisiki yakakosha mafuta Lavender Oiri muhuwandu huwandu
Mafuta akakosha anogona kushandiswa muzvinonhuwira, kukwiza muviri uye zvigadzirwa zvepanyama. Kune maviri marudzi: imwe isanganiswa yakakosha mafuta; imwe ndeye 100% yakachena yakakosha mafuta. Zvinogona kuita kuti vanhu vanzwe vakasununguka zvese mumuviri nepfungwa, saka zvinogona kuchengetedza vanhu kubva kuzvirwere nekukwegura.
Chemical Zita: Lavender Oiri
Mafuta elavender anotorwa zvakanyanya kubva pamaruva eiyo lavender chirimwa, kunyanya kuburikidza nemhepo distillation. Maruva elavender anonhuwirira mune zvakasikwa uye ave achishandiswa kugadzira potpourri kwemazana emakore. Pachivanhu, lavender yakakosha mafuta yakashandiswawo mukugadzira zvinonhuwira. Oiri inobatsira mu aromatherapy uye akawanda anonhuwirira gadziriro uye musanganiswa. Oiri yeLavender inosangana mushe nemamwe mafuta akawanda akakosha anosanganisira musidhari, paini, clary sage, geranium, uye nutmeg. Nhasi, lavender yakakosha mafuta inowanzo shandiswa mumhando dzakasiyana kusanganisira aromatherapy mafuta, gels, infusion, lotion, uye sipo.
1. Dzora Bhugi
Kunhuhwirira kwemafuta elavender kwakakosha kune akawanda marudzi eembug seumhutu, midges, uye moths. Isa imwe yemafuta elavender pane rakaratidzwa ganda kana uri panze kudzivirira izvi zvinotsamwisa. Zvakare, kana iwe ukaitika kuti wakarumwa neimwe yeaya mabhugi, iyo lavender yakakosha mafuta ine anti-kupisa hunhu iyo inoderedza kutsamwa uye kurwadziwa kunosangana nekurumwa kwechiputi.
2. Inokurudzira Kurara
Lavender yakakosha mafuta inokonzeresa kurara uko kwakaita kuti ive yakajairwa kurudziro yeimwe nzira yekurapa yekushaya hope. Kakawanda kuongorora varwere vakura kwakaratidza kuwedzera kwekurara kwavo nguva dzose apo yavo yekurara yekurapa mishonga inotsiviwa neimwe mafuta elavender akakosha achiiswa pamapiro avo. Iyo ine zororo rinozorora pane vanhu kuti inogona kazhinji kutsiva mushonga wemazuvano wezvekurara nyaya.
3. Inochengetedza Utano Hwakanaka Hwehutano
Lavender yakakosha mafuta ine yekudzikamisa hwema iyo inoita iyo yakanakisa tonic kune tsinga uye kunetseka nyaya. Naizvozvo, inogona zvakare kubatsira pakurapa migraines, kutemwa nemusoro, kushushikana, kusagadzikana kwekutya uye kushungurudzika mupfungwa. Iyo inonhuwira inozorodza inobvisa kuneta kwekutya uye kusagadzikana uku zvakare ichiwedzera chiitiko chepfungwa. Iyo ine yakanyatso tsvagirwa kukanganisa kune yekuzvimiririra manungo system, ndosaka ichi ichiwanzoshandiswa sekurapa kwekushaya hope uye zvakare senzira yekugadzirisa moyo-chiyero kusiana. Imwe ongororo yakaratidza kuti vanhu vari kutora bvunzo vakaratidza kuderera kwakanyanya mukushushikana kwepfungwa uye kushushikana, pamwe nekuwedzera kwekuziva mashandiro pavakafema mafuta elavender neorosemary mafuta vasati vatora bvunzo.
Chengetedza munzvimbo yakavharwa zvakanaka munzvimbo inotonhorera uye yakaoma, yakaparadzaniswa nezuva.
Makore maviri pasi pechakanaka Chekuchengetedza mamiriro uye akachengetwa kure kubva kuzuva rakajeka zuva
1kg / bhodhoro, 25kg / dhiramu, 50kg / dhiramu, 180kg / dhiramu
isina ruvara kune yerogreen volatility mafuta, Iine
hunhu nyowani lavender kunhuwirira
0.875 ~ 0.895
1,457 ~ 1.470
nyore kusungunuka mune anopfuura 75% ethanol
linalyl acetate45% Linalool 12% pinene, nezvimwe
* Pamusoro pe:
Iyo kambani inogona kutsvagiridza nekuvandudza iyo nyowani nyowani zvichienderana nezvinodiwa chaizvo nevatengi vedu．
Pashure: China GMP fekitori inopa 100% Yakachena uye Natural yakakosha mafuta Camphor Oiri
Zvadaro: 100% yakachena uye yakasikwa 50% 65% 85% pine mafuta mumutengo wakanaka cas 8002-09-3
Mutengo wakanaka Carvacrol liquid cas 499-75-2
High kuchena 98% Maminitsi Shizha Doro CAS 928-96-1 ci ...
100% yakachena uye yakasikwa Sinamoni Oiri CAS 8007-80-5
100% Yakachena uye yakasikwa Camphor upfu cas 76-22-2
100% yakachena uye yakasikwa 50% 65% 85% paini mafuta mukuenda ...
100% yakachena chaiyo Beta pinene muhuwandu CAS 127-91-3